Mivelatra amin’ny fiaraha-miasa rehetra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tanjon’ny fikambanana araka ny nambaran’i Fy Andrianarison izay reny mpiahy ny ampivoatra ny mpikambana tsirairay izany hoe fivalaran-tenan’ny mpikambana (développement personnel) ary andaniny ny fampivoarana an’Ambohidratrimo iray manontolo mihitsy. Tsiahivina moa fa i Fy Andrianarison dia efa kandidà solombavam-bahoaka tain’ny fifidianana farany teo. Ka na tsy lany aza ny tenany dia mitohy hatranyny asa sosialy ataony atao anatin’ny Distrikan’Ambohidratrimo. Nambaran’i Fy Andrianarison nandritra ny fifampiarahabana sy ny firarian-tsoa nahatratrarana ny taona 2021 ho an’ny fikambanana ny sabotsy 27 martsa teny amin’ny tranompokonolona Ambohidratrimo fa « mivelatra amin’ny fiaraha-miasa rehetra ny fikambanana, na io fanjakana, na ny tsy miankina, na ONG, na tetikasa sy ny maro hafa. ». Nanolotra vatomamy ho an’ny FBM (Fikambanam-Behivavy Mivoatra) Ambohidratrimo ny tenany.
Mivalatra amin’ny sehatra rehetra ny fikambanana araka ny nambaran’i Ramatoa Michou sy Emmerencienne izay birao . Ao ny sehatry ny fahasalamana sy ny fiarovana ny tanora, ny tontolo iainana sy ny fiovaovan’ny toetr’andro, ny filaminana sy ny fandriampahalemana, ny ady amin’ny kolikoly, ny fialamboly sy ny fanatanjahan-tena ary ny resaka fandraharahana amin’ny tontolo ambanivohitra (fambolena sy ny fiompiana).
Mikasika ny zava-bita dia efa nisy ny hetsika nato entina niarovana ny tontolo iainana toy ny fambolen-kazo tao amin’ny CEG Ambohidratrimo sy ny teny amin’ny Rovan’Ambohidratrimo. Nisy ihany koa ny fizarana vatomamy ho an’ny ankizy tamin’ny fetin’ny Noely tamin’ny taona lasa.
Vina manaraka ny hananganana « vitrine » iray ao Ankadibe izay làlana miakatra mankany amin’ny Rova. Trano izay sady atao biraon’ny Fikambam-behivavy Mivoatra no entina anehoana sy ivarotana ireo asa tànan’ny mpikambana, na io taozavatra Malagasy na vokatry ny fiompiana sy ny fambolena. Efa nisy moa ny fihaonan’ny birao tamin’ny Tale Jeneralin’ny Tanora Juliana Ratovoson eo anivon’ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahan-tena ny amin’ny fanatanterahana izany, koa miandry ny rehetra.
Fiainam-bahoaka : Hadino ny vahoaka, ny seho ivelany hatrany no misongadina - il y a 11 jours
Ny tanora sy ny hamehana ara-pahasalamana : Misy ihany ireo lafi-tsaran’izao fihibohana izao - il y a 18 jours